10 सर्वोत्तम गोल्फहरू जसले परास्नातकलाई कहिल्यै हराउँदैनन्
गोल्फको सबैभन्दा ठूलो खेलाडी भन्दा अधिक मास्टर्स जीता छ ... तर तिनीहरू सबैले गर्दैनन्। मास्टर्समा विजय बिना खेलको इतिहासमा सर्वश्रेष्ठ गोल्फरहरू को हुन्? हामी शीर्ष 10 लाई गिनौं।
(नोट: मास्टर्स पहिलो पटक 1934 मा खेलेका थिए, त्यसोभए, गोल्फर जसको क्यारियरहरू 1934 भन्दा अघि समाप्त भएन। कम्तीमा तीन मालिकका साथ मात्र गोल्फरहरू विचार गर्थे। Walter Hagen , Bobby जोन्स र टोमी आर्मर विशेष रूपमा विचारबाट हटाइएको थियो किनभने तिनीहरूका क्यारियर आफ्नो समय को नजिकै नजिकै थियो मास्टर्स स्थापित गरियो। जोन्स 1930 मा प्रतिस्पर्धा देखि सेवानिवृत्त हो, यद्यपि उनले 10 देखि अधिक मास्टर्स मा खेले।)
3-पटक प्रमुख चैंपियनशिप विजेता जुलियस बोरोसले 1963 मा चित्रण गरेका थिए। बेटिन / गेट छविहरू
जुलियस बोरोसले पीजीए टूरमा 18 पटक जिते, जसमा तीन जना साथीहरू छन्। उनको अन्तिम प्रमुख 1968 मा पीजीए च्याम्पियनमा 48 वर्षको उमेरमा आइपुग्थ्यो। द मास्टर्स मा 25 उपस्थितिहरु मा, उनको सर्वश्रेष्ठ खत्म तीसरे को लागि एक टाई थियो।
लयड मंग्रमले 1956 टूर्नामेंटको दौडान एक हड्ताल गरे। बेटिन / गेट छविहरू
पीजीए टुरमा एक 36-पटक विजेता, एक प्रमुख च्याम्पियनशिप विजयी हुँदा, लयड मैंग्रमले अगस्टाना नेशनलमा धेरै राम्रो वर्ष थिए। उनले कहिल्यै चीज कहिल्यै जितेनन्।
मंगलबार दोस्रो पटक दोस्रो, दोस्रो पटक दुई चोटि र चौथो पटक। 1947 देखि 196 सम्म, उनले 8 बजेट भन्दा कम गरे।
1985 मास्टर्स टूर्नामेंट को समयमा हेल इरविन डेविड क्यानन / गेट छविहरू
तीन-पटक यूएस ओपन च्याम्पियनले 1970 को सबैभन्दा राम्रो प्लाड प्यान्ट लगाए। तर हेल ​​इरानले शीर्ष 10 सात चोटि समाप्तिको बावजूद मास्टर्स च्याम्पियनको रूपमा मुकुट खेल्न सकेनन्। 1974-77 बाट इरिविन अगस्ट 1 मा5अङ्क भन्दा कम भयो।
निक मूल्य (अगस्ट 2004 मा) एक परास्नातक टूर्नामेंट मा 63 को गोल्फर को पहिलो गोल्फर थियो। एन्ड्रयू रेडटनटन / गेट इमेजहरू
निक मूल्य एक पल्ट ब्रिटिश ओपन जीता र दुई पल्ट पीजीए च्याम्पियन जीता। तर उनको परास्नातक मा मास्टर्स पाँचौं स्थान थियो। उहाँले छैटौं तीन चोटि समाप्त गर्नुभयो।
पाँचौं भन्दा राम्रो छ आश्चर्यजनक कुरा हो कि अगस्टाना नेशनल स्पष्ट रूपमा एक पाठ्यक्रम थियो मूल्यलाई क्षति गर्न सक्छ। त्यो पछि, पहिलो परास्नातक मा परास्नातक मा 63 को गोली मारने को लागि, 1986 मा तेस्रो दौर मा गर्दै थिए।
ग्रेग नरम 1 996मा एक मिस-मिस गरिएको चिप शटमा पराजित गर्छ। डेविड क्यानन / गेट छविहरू
अगस्टमा ग्रेग नर्मोनको हावाको बिरुवा कथा हो। 1986 मा, जैक निकलोसको अन्तिम चार्जले उनलाई हरायो। 1987 मा लैरी मिसको चिप-इनले उसलाई हरायो। अनौपचारिक रूपमा, 1 996मा , उनको आफ्नै पतन र निक फलोडोको उत्कृष्ट राउन्डले उनलाई हरायो।
त्यस प्रकारको कुरा नर्मनको लागि धेरै भयो र नस्टस्टमा मात्र होइन। उनले अझै पनि हॉल अफ फेम विजयको साथमा राख्न सम्भव भए तापनि।
के जनी मिलर गोल्फ बल खाने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ? यो उहाँ 1975 मास्टर्सको अन्तिम हरियो बन्द हुनुभयो। बेटिन / गेट छविहरू
जेनी मिलर एक महान परास्नातक, 1975 मा शामिल भएको थियो , जब जैक निकलस 'ब्याक-नौ सर्जले मिलर र टम वेस्कोपर्फ भन्दा पहिले उनलाई संचालित गरे।
मिलर उन मान्छे मध्ये एक हो जसको खेल अस्टाना नेशनल को लागी एकदम सही लग रहेको थियो, तर उनले आश्चर्यजनक कुरा हो कि केहि शीर्ष 10 समाप्त हुन्छ: केवल 19मास्टर्स उपस्थिति मा केवल चार। तर तीमध्ये तीन (1975, 1973, 1981) दोस्रो-स्थान कार्यक्रम थियो।
एन्नी एल्स 1994 मास्टर्स मा 13 औं हरियो पछि उनको गोल्फ बॉल को रूप मा लगभग हराएको छ। डेविड क्यानन / गेट छविहरू
त्यहाँ अझै पनि एक स्लिम (धेरै पतला) मौका हो जुन एनी एलिसेले आफूलाई यो सूचीबाट हटाउन सक्दछ, तर उनी 40 वर्षको राम्रै राम्ररी लागेका छन्।
एल्सको शक्ति र स्पर्शको संयोजन अगस्टाना नेशनलका लागि दर्जा बनाइएको थियो। एल्सले चार महाधिवेशन जितेका छन्, हालैमा 2012 को ब्रिटिश ओपन । उहाँले दुई मालिकलाई दोस्रो पटक समाप्त गर्नुभयो, तर कहिल्यै यो जितेन।
4-पटक प्रमुख चैंपियन बबी लोके। Getty Images
बॉबी लकले ब्रिटिश ओपनलाई चार पटक जित्यो। 1940 को दशकमा पीजीए टुरमा, लुकले 59 टूर्नामेंट खेलेका थिए र 34 मध्ये 34 मध्ये शीर्ष4समाप्त भयो।
तर 1949मा, लक्की र पीजीए टूर को प्रतिबद्धताहरु को खेलहरु मा लडाइँ मा मिल्यो र दौरे उनको प्रतिबंध लगायो। त्यो प्रतिबन्ध दुई वर्ष पछि हटाइयो, तर लुकै छोटो अमेरिका फर्क्यो। उनले मास्टर्सलाई मात्र चार पटक खेलेका थिए, उनले 10 औं मिनेटमा उनको उत्कृष्ट टाई टाई गरे।
5-पटक ब्रिटिश ओपन च्याम्पियन पीटर थॉमसन। एच थामसन / इभेन मानक / हल्टन सङ्ग्रह / गेट छविहरू
महान अस्ट्रेलियनले कहिलेकाहीं सबै भन्दा राम्रो लिङ्क गोल्फरहरू मध्ये एक थियो, ब्रिटिश ओपन पाँच पटक जित्छिन्। तर आठ परास्नातक उपस्थितिमा, पीटर थॉमसनले केवल एक चोटि शीर्ष 10 मा समाप्त गर्यो।
उनले मास्टर्सहरू प्राय: प्राय: खेल्न सक्थे, तर उनीहरूलाई मनोनयन गरेनन्, युरोप र अष्ट्रेलियामा कम मनोरञ्जित गोल्फ कोर्सहरूमा ध्यान दिएर। थामसन केहि गोल्फर्स मध्ये एक छ जो सार्वजनिक रूपमा अगस्टाना नेशनल को नापसंद मानिन्छ।
1986 मास्टर्सको दौडान ली ट्रेविनो बंकरबाट खेल्छ। पीटर देजलेले / गेट छविहरू
ली ट्रेविनोले पीजीए टूर (र च्याम्पियन्स टूरका अन्य29 पटक) मा29 गुणा जित्यो, र त्यसमा यो अंकमा तीन जनाका साथीहरूमा दुई जीतहरू छन्: यूएस ओपन, ब्रिटिश ओपन र पीजीए च्याम्पियनशिप। ती संख्याहरू अझ बढी प्रभावकारी हुन सक्छ तर ट्रेभिन पछि 1975 मा बिस्तारै बिस्तारै पछि लाग्ने चोटको कारण हुन सक्छ।
चोट मा परास्नातक मा Trevino समस्या थिएन, यद्यपि। Trevino, उनको समकालीनहरूले भन्छन्, आफूलाई मालिकको जीत जितेको छ। उनको विश्वास थियो कि उनको खेल गोल्फ कोर्स को लागी उपयुक्त थिएन, र उनले 1970 को दशक मा आफ्नो उदय को समयमा एक जोडे मास्टर्स छोड दिए।
ट्रेभिनलाई नेस्टा नेशनलमा कहिल्यै सहज महसूस गरेन। उनले प्राय: आफ्नो कारबाट ड्राइभिङ दायरामा हेड गर्दै क्लब हाउसमा प्रवेश गरेन। एक परास्नातक मा ट्रेभिनको सर्वश्रेष्ठ समापन 1975 र 1 99 1 मा 10 औं थियो।
मास्टर्स टूर्नामेंट सूचकांकमा फर्कनुहोस्
महिला गोल्फ मा सबैभन्दा कम गोल मेजर
2018 युरोपियन टूर अनुसूची
मालिकहरूको दौडान कति गोल्फहरूले एक होल-इन-एक बनाएको छ?
महिलाहरु ब्रिटिश ओपन विजेता
ब्रिटिश ओपन विजेता
धनुष मानिसको हृदयलाई जीत
पवित्र मर्द्युल मनाउने
मन्दिरको गोल्डेन लैंपस्ट्यान्ड
प्राय: मतदान गर्न अधिक छ: महिलाहरु या पुरुष?
3 तितली कोर प्रशिक्षण व्यायाम
धातु र नमुनाहरूको उदाहरणहरू र प्रयोगहरू
रिवर्स असमस कसरी काम गर्दछ
गल्ती विषाक्तताको वर्णन
एनएफएल सबैभन्दा मान्य खेलाडीहरू: MVP हरुको सूची
'तिनीहरूको आँखाहरूले परमेश्वरका उद्धरणहरू हेर्दै थिए
पृथ्वीमा सबैभन्दा सबैभन्दा घातक क्याप्टर के हो?
कलेजमा निर्णय गर्दै: कुन विश्वविद्यालयमा भाग लिन छनौट गर्नुहोस्
ठूलो अवसाद के थियो?
बास उपकरणहरूको प्रकार
फ्रांसीसी शब्द टेनिस र मूड अनुवाद गर्न परिचय
नयाँ बयान (हरू)
शीर्ष Bon Jovi गाने को '80s
Mabon पाक कला र व्यञ्जनहरु
पट्टे परित्याग गर्ने के थियो?
समीकरण प्रणालीमा उपधारा विधि प्रयोग गर्नुहोस्
गुणन ट्रिक्स र छिटो शिक्षाको लागि सुझावहरू